Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै, निमोनियाको खतरा – Emountain TV
डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै, निमोनियाको खतरा
डडेल्धुरा, २१ कात्तिक । चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि ७ बुँदे माग राखेर डडेल्धुरामा १७ औँ पटक अनसन शुरु गर्नु भएका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । कार्तिक १८ गतेबाट १७ औँ अनसन शुरु गर्नुभएका डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएको चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
चिकित्सकका अनुसार डडेल्धुराको बढ्दो चिसोले डाक्टर केसीलाई निमोनियाको खतरा बढेको छ । कार्तिक १८ गतेबाट आफ्नो १७ औँ अनसन शुरु गर्नु भएका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुन थालेको छ । सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा पुगेर १७ औँ अनसन शुरु गर्नु भएका डाक्टर केसीको रक्तचापमा उतार चढाव तथा चिसोबाट हुने स्वास्थ्य समस्याहरु देखिन थालेको चिकित्सकको भनाई छ । डडेल्धुराको बढ्दो चिसोले डाक्टर केसीलाई निमोनियाको खतरा भएको चिकित्सक जितेन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
१७ औँ पटकको अनसनका लागि डाक्टर केसी डडेल्धुरा अस्पतालबाट १ सय मिटर पर बस्नु भएको छ । उहाँले अहिले ७ बुँदे माग अघि सार्नु भएको छ । विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा मापदण्डका आधारमा नभई दलीय र नेतागत भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएकोमा डाक्टर केसीको विरोध छ ।
डडेल्धुरा अस्पतालबाट १ सय मिटरको दुरीमा रहेको निर्मल मेडिकल हलको माथिल्लो तलामा डाक्टर केसी अनसनरत हुनु हुन्छ ।डडेल्धुराका स्थानीयहरुले पनि उहाँको अनसनलाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन् । उहाँले अहिले ७ वटा प्रमुख माग राखेर अनशन गर्नु भएको छ । केही दिन सरकारको प्रतिक्रिया हेरेर माग थपघट हुने डा.केसीको भनाई छ ।
बिहिबार, २१ कार्तिक २०७६
दाङमा समय अगावै पुल निर्माण सम्पन्न, स्थानीय खुशी
ट्रमा बिरामी को हुन् ? दुर्घटना भएपछि कसरी उद्धार गर्ने ? : डाक्टर दमन झा (भिडियोसहित)
तरुण दलद्धारा बाँके बन्द
धान्नै गाह्रो भो भान्साः सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा, तरकारीको मूल्य तीन गुणा बढ्यो
निमोनियाले मिर्गौला र कलेजोसम्म असर पार्न सक्छ
बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदको आज चन्द्रागिरि र पाटन दरबार अवलोकन गर्ने तयारीमा
भारतले नेपाली भूमी गाभेको विषयमा चीनको यस्तो आयो प्रतिक्रिया
बाल–मजदुरमा मानसिक समस्या
धानमा व्यापारीको मनोमानी, किसान भन्छन्-‘भुसको भाउमा धान बेच्नुपरेको छ’